Raaxada Sariirta: ka hor la raaxeysiga ninkaaga | Cishqi.com
Raaxada Sariirta: ka hor la raaxeysiga ninkaaga
Raaxada Sariirta ninka ama raaxada ciyaarta sariirta Ugu macaan ee ninkaaga, ka hor inta aadan bilaabin galmada. Marxaladahani ma wanaagsano inaad la raaxeysato ninkaaga.
Raaxada sariirta, goorta aad la raaxsaneyso ninkaaga
Raaxada sariirta gaar ahaan goorta ee aad la raaxeysaneyso ninkaaga, ha sameyn waxyaabahaan, marxaladahani ma fiicno inaad la sameyso ninkaga galmo, sababahaan soo socdo awgii.
Haddii aan nahay gabdho, waxaan jecelnahay xiliga raaxada sariirta inaan la wadaagno ninkeena raaxo aan caadi ahayn. Mararka qaar waxaa dhacdo inaanan awoodi karin soo bandhigida dareenkeena ama aan u sheegno isaga waxa aan jecelnahay.
Hadaba waxaa fiican inaadan ninkaaga ka qarin dareenkaaga xiliga raaxada sariirta. Ugu sheeg si sarbeeb ah haddii ay kugu adag tahay inaad toos ugala hadasho.
Mid Iga qor raga aad ayeey u jecelyihiin xaaska kala hadasho raaxada sariirta ka hor inta uusan guriga imaan.
Raaxada sariirta qolka jiifka
Ma ahan inaad dhaheyso kaalay macaanow ila raaxeyso ee waxaa u direysaa erayada raga dareenkooda kiciyo gaar ahaan kuwa la isticmaalo raaxada sariirta ka hor.
Xaasas badan weey garanayaan sida loo kiciyo dareenka ninka xiliga sariirta balse waxaa jiro qaar ay ku adag tahay.
Haddii aad kamid tahay dumarkaasi, waxba haka welwelin! iyagu weey barteen, adigana maanta ayaad baran kartaaa, weliba boggeena: cishqi.net.
Qish: Cishqi Jaceyl qeybtii 1-aad
Raga qaar waxaa laga yaabaa in ay fahmaan xaasaskooda iyagoonan u sheegin, ama aanan u dirin erayo jaceyl oo dareen leh halka kuwa qaar ay ku adag tahay. Maxaa la iga rabaa inaan sameeyo markuu ninkeyga waxba fahmeynin? Jawaabta macquulka: Inaan u sheego oo aan gacanta ka soo qabto. Yarow halkaan goormee kuu dambeysay, ma xasuusataa?
Dumar badan waxay ku haminayaan xiliga raaxada sariira in loogu galmood qabab kala duwan ama in goobo cusub loogu galmoodo. Maalin sariirta, maalin qolka fadhiga, maalin jikada iyo maalin barkada qubeyska.
Hadaba maanta waxaan kula waadgeynaa waxyaabo mamnuuc ah xiliga ciyaarta sariirta oo ay qasab tahay inaadan sameynin, goorta aad la raaxeysaneysid ninkaaga.
1. In wax kale idin soo dhex galaan xiliga raaxada sariirta
Raga ma jeclo xiliga sariirta in ay wax kale soo dhex galaan, taasi waa No-Go. Raga sariirta dhankoda lagama maro. Waxay u sameeyaan wax walbaa. Haddii ay taasi dhacdo waxaa suurto gal ah inuu kaa xanaaqo. Waxay ku dhacday dumar fara badan oo maanta garoobo ah.
Waxaad ku jirtaan xiliga sariirta ama galmada, waxaad la raaxeysaneysaa ninkaaga kadibna waxaa kuu soo dhacay teleefoon ama sms, Kadibna waxaa hakad galay raaxadiina, ama ninkaaga oo meel macaan umareyso ayaad qabyo ka dhigtay.
Ma ogtahay in ragu ay aad u necebyihiin erayga qabyo? Waxaa laga yaabaa inaad maqasho „Qabyo ninkeedaa dhameystiro“. Taasi waxay kuu cadeyneysaa in aysan raga jecleyn waxa loogu yeero „Qabyo“.
Sidaa darteed xiliga aad la raaxeysaneyso ninkaaga, iska dami teleefoonkaaga, kana fogow waxyaabaha idin soo dhex geli karo.
Qish: Baro Fariimo jaceyl ah
2. Halaaqyo timaado xiliga galmada
Waa habeen jimco oo ninkaaaga ka nasanayo howlaha shaqada, waa habeenka uu ugu jecelyahay joogitaanka guriga. Wuu soo qubeystay, isa soo carfiyay kadibna wuxuu rabaa inaa u shido leerarka casaanka ah ee romantiga ah adigana waad sameyn weysay.
Wuu ku sugay, adigana waad fahmi weysay. Kadibna wuxuu go,aansayay inuu kugu bilaabo taataabasho diiran, dhuuqmo iyo inuu dharka kaa bixiyo. Xoogaa weey kugu yara kacday kadibna waad iscelin weysay.
Adiga kaama heynin raaxo oo waxaa laga yaabaa in caruurtu ku wareeriyeen oo aad daalan tahay. Hadana waxaa is tiri ninkaaga ma dhihi kartid maya balse waad halaaqyootay. Hadaba raga ma jeclo halaaqyo xiliga sariirta ee ka dignoow.
3. Inaadan kala hadlin dareenkaaga
Caawa waa habeen ay aad kaaga taalo, jirkaaguna u baahan yahay taabasho dareen leh balse waad xishooneysaa oo ninkaaga ma dhihi kartid: Macaanow kaalay ila ciyaar oo igeey beerta Janada. Maxaa yeelay waxaad ku marmarsinyooneysaa waa ceeb, waxaasi ma dhihi karo.
Ma ogtahay in raga 90% (boqolkiiba sagaashan percent) ay jecelyihiin dumarka balansado ka hor inta aysan guriga imaan. Haddii aad ogtahay sida ay ugu riyaaqaan, ma dhihi lahayn waxaasi waa ceeb. Hadaba ninkaaga dareensii inaad u baahan tahay oo ay kaa taalo. Maxaa yeelay raaxada sariirta waxay ku timaado rabitaan dhab ah.
4. Raaxada sariirta bilaa nadaafad
Haddii aan nahay dumar inta badan waan ka taxadirnaa nadaafad la,aanta xiliga raaxada sariirta, hadana waxaa jirto Faadumo ku cusub ninka oo laga yaabo inaysan sariirta soo goglin, qolka soo carfin, romaantik iska dhigin.
Sidaa darteed haddii ay marmarka qaar sidaas kaa dhacdo, waa muhiim inaadan mar dambe sidaas sameynin. Sabab? Sababtoo ah waxaad sababeysaa in ninkaaga uu raadiyo naag kale ama uu ka caajiso inuu kula raaxeysto.
Haka mid noqon dumarka intooda badan ku dhiban nimankooda misana ku haayo „Ninkeyga iguma qanciyo sariirta ee maxaan sameeyaa? Hadaba si uu ninkaaga kuugu qanciyo sariirta ama aad uga hesho qancinta sariirta, waxaa fiican inaad ka taxadirto nadaafada sariirta iyo guud ahaan qolka jiifka.
5. Calool Xanuun
Calool xanuun aaa? Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso calool xanuun iyo raaxada sariirta maxaa isu keenay? Hadaba aan jawaab ku siiyo. Marmarka qaar waxaa dhacdo in calooshaada ka yeereyso qururac ama ku qasan tahay.
Haddii ninkaaga uu jeclaado in xiligaasi kula raaxeysto isku day inaad markale ka dhigto, una cudur daarato sida inaad xanuunsan tahay oo kale oo aad jeclaan lahayd inaad markale la raaxeysato.
Sababtoo ah, haddii aadan u cudur daaranin misana aad la sameyso raaxo, waxaa macquulka xili ay meel Mac mareyso in caloosha qururac ku tiraahdo ama kaa fakato baahasha. Taasna ma ahan wax qurux badan.
Wax ka ogow calaamadaha lagu ogaado jaceylka dhabta ah
Ninkaaga yuusan kugu nicin 6-daan
5 waxyaabood oo ay raga jecelyihiin
Ninka xaaskiisa neceb waxaa lagu gartaa
6. Jirkaaga oo aan nadiif ahayn
Dumar badan ayaa laga yaabaa in ay dhahaan „sidee ugu tagaaa ninkeyga“ anigoonan nadiif ahayn? Nadiifinta ma han oo kaliya inaad soo qubeysato ee sidoo kale waa muhiim inaad xubinta taranka Biko Beelo ka dhigto. Raga baahasha oo carfeeyso markeey dareemaan ma sii wadayaan raaxada oo kaliya ee waxa ay sidoo kale ka qaadayaan kacsi waali ah.
Xiro mar walbaa kastuumo ama nigis nadiif ah
7. Iska ilaali inaad ugu yeerto magaca ninkaaga hore
Hanad, Hanad, in raga ay jecelyihiin xiliga raaxada sariirta in loogu yeero magacooda ma ahan wax qurux badan oo kaliya ee waxa ay ka qaadaan raaxo aanan caadi ahayn.
Sidaa darteed haddii uu ninkaaga jecelyahay ugu yeerida magaciisa ama aad adigu jeceshahay inaad ugu yeerto magaciisa xiliga galmada, gaar ahaaan xiliga kala guurka ah. Fadlan iska ilaali inaad magac kale ugu yeerto sida haddii aad nin kale horay u soo guursatay oo kale.
Noqo akhristaha ugu horeeyo ee aan u soo dirno qormooyin xiiso leh
Waxyaabaha aan kor kusoo xusay ee ku saabsan raaxada sariirta, dumarka intooda badan weey ka fikiraan balse waxaa jirto dumarka qaar oo aanan taas muhiimad gaar ah siinin. Sidaa darteed ka taxadir, haddii aad kuwaasi kamid tahay.
Sababta aan u jecelnahay inaan idinla wadaagno maqaalo nuucaan ah?
Sababtoo ah waxaan jecelnahay inaan dhalinta ka caawino waxyaabaha daruuriga ah, si noloshoodu ay u noqoto mid farxad badan. Hadaba si raaxada sariirta ay u macaato u qurxi ninkaaga wax walbaa si cajiib ah.
Haddii aad jeceshahay inaan kula wadaagno qormooyin kale oo xiiso leh, fadlan halkaan hoose iska diiwaan geli.
Qoraa: Saabiriin Sabnaa